Waa nasiib darro, hanaanka shaqo ee saxaafadda oo ay faraxumayn ku samaynayaan kuwo aan ahayn saxafiyiin oo ka been abuuraya mihnadda shaqaddan |
Waa nasiib darro, hanaanka shaqo ee saxaafadda oo ay faraxumayn ku samaynayaan kuwo aan ahayn saxafiyiin oo ka been abuuraya mihnadda shaqaddan
Qof aan ahayn caqli ahaan iyo jidh ahaanba mid aan caafimaad qabin, ma aha in loo aqoonsado saxafi. Qof cidiyaha,iyo timuhu ku baxeen oo shaadhkiisa an maydhan karin ma loo aqoonsan karaa, wariye. Tan labaad qof aanu iimaan ka muuqani ma noqon karaa qof wax laga rumaysto oo websiteyada qaar wuxuu sito ee uu sida uu rabo u mulmulaaqay war ka dhigaan. Miyaanay ahayn arin anshaxii saxaafadda ka hor imanaysa.
Dhawaan warbaahinta qaar ee dhinaca websiteyada waxaan ku arkayay vidio fake ah ama aan sharci loo duubin oo wax lagaga sheegayo sharafta iyo cirdiga muwaadinad shaqaale ka ah wasaaradda maaliyadda. Muwaadinaddan waxa laga duubay, vidio sir ah isla markaana, hadalo ay ku hadashay oo aan wax ceeb ahi ku jirina waxaa lagu daray hadallo been abuur ah oo meel kale laga soo qaatay.
Sidaa awgeed shaqsiyaadka ku been abuuranaya mihnada saxaafadda, ee arimaha noocan ah galaya, waa kuwo la yaqaan oo dhawaan kasoo dhex muiqday uun saaxadda warbahinta dalka. Hadii aan xukuumadda, golayaasha sharci danjinta iyo garsoorku wax ka qaban waxay abuuri kartaa fawdo iyo iska horkeen bulsho. Waa in ururka saxafiyiinta soomaaliland talaabo sharci oo arimahan dhinaca anshaxa ah ka qaadaan iyaga laftoodu oo faxshigan warbaahinta lagula jiro ka hawlgashaa.
Waxa la ii sheegay in arintan vidioga sirta ah ay sameeyeen, laba shaqsi oo marka aad arkayso in caafimaad ahaan jidh iyo maskaxba aan fayoobayn.
Waxa la iigu sheegay magacyadooda Caarshe iyo dirir, waxa ay social mediaha ay soo dhigaana waa wax laga yaqyaqsoodo oo bulsho iska horkeen ah
Sidaa darteed dhacdooyinka noocan ah oo soo noqnoqdaa waxay keeni kartaa hadaan dawladu wax ka qabanna, waxa iman in sharciga gacanta lagu qaato oo si shaqsi ah la isaga celiyo kuwa ceebahan aan jirin dusha uga tuuraya qof aan gayin. Laba website oo lakala yidhaa saylactoday iyo Baraarug news ayay labadan nin feed gareeyaan, waxaana inta badan gabood fallo loogu gaystaa iyo canbaarayn masuuliyiin sharaf leh. Mana laha bir ma gaydo oo waxay cay iyo canbaarayn u gaystaan wasiirka maaliyadda iyo Agaasimaha waax maamulka lacagta ee wasaaradda.
Ugu danbayntii hadii aan labadaas shaqsi iyo websiteyadaa sharciga la horkeenin, waxa iman in dumarkan walaaladood, iyo wiilashooda ay dhaleen ama ay la dhasheen oo aad meelkastaba jooga in ay talaabo qaadi karaan waxa se wali laga dhursugayaa hay addaha sharciga iyo fulinta
Rasuulkeena suubanina scw wuxuu inoo sheegay in qofka aan xishooni, aanu iimaan lahayn.
In labaddan nin ee la ii sheegay magacyadooduna way caddahay inaanay iimaan lahayn maadaama aanay xishood lahayn.
by badrudiin maxamed xasan